दलाल पुँजीवादको नेतृत्व नै हाम्रा पार्टीहरूले गरेको देखिन्छ : घनश्याम भुसाल, स्थायी समिति सदस्य, (नेकपा) – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७५ श्रावण २, बुधबार) ०८:४०
रुपन्देही–३ बाट निर्वाचित संघीय सांसद घनश्याम भूसाल नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति सदस्य छन्। उनी लेख्न–पढ्न बढी मन पराउने वाचाल–वक्ताका रूपमा चिनिन्छन्। हाम्रो समाजको चरित्र अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक कि पुँजीवादी, वर्गचरित्र, नोकरशाही, नवउदारवाद, साम्राज्यवाद, द्रव्य पुँजी, उत्पादक पुँजी, यी र यावत् सैद्धान्तिक–वैचारिक विषयलाई थाँती राखी उनीसित विमल आचार्यले गरेको संवाद :
जित संस्थागत हुनुपर्थ्यो। जित राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपथ्र्याे। राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको यात्रामा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। सरकार बनेको यति महिनासम्म राष्ट्रलाई, गरिबलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम नआउनु दुःखको कुरा हो।
कम्युनिस्ट पार्टीको एकल वर्चस्व हुँदा पनि हामी यति गतिहीन हुनु नपर्ने हो । पार्टी पंक्तिमा अहिले वैचारिक बहस भएन भन्ने कुरा तल तलसम्म हुँदैछ। आउने महाधिवेशनमा हामी विचारमा केन्द्रित हुँदैछौँ। पद र पैसाका पछि कुद्नु समाजवाद हैन। सबै कमरेड निजी दाम र नाम कमाउन कुद्ने हो भने समाजवाद कसले ल्याइदिन्छ? पार्टीलाई सत्यानाश हुनबाट जोगाउन जरुरी छ।
केपी ओली मेरो विचारमा आए भन्नुभएको छ। अब त नवगठित पार्टी नै यहाँको ‘लाइन’मा आयो। अबको महाधिवेशनमा जसको विचार, उसको नेतृत्व हुने सम्भावना छ?
म हिजो त्यस्तो उपमहासचिव हुँ, जसलाई पार्टीले केही जिम्मेवारी तोकेको थिएन। अरु सबै साथीका जिम्मेवारी थिए। मेरो थिएन। तर पनि म मेरो हिसाबले सक्रिय नै थिएँ । म हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै सम्भावना देख्छु । को के पदमा पुग्यो, को कति सम्पन्न भयो, यस्तो कुराले मलाई असर पार्दैन। म हिजो पनि र आज पनि पदको आकांक्षी छैन।
हाम्रो पार्टीमा तीन थरी मान्छे छन् । पहिलो खालका मान्छेमा उही आदर्श, उही प्रतिबद्धता, उही इमानदारी, उही निष्ठा छ। यी दृश्यमा छैनन्। दबाइएका छन्। अर्काे खालकामा उनीहरूले कम्युनिस्ट बन्धन टुटाइसकेका छन् र अन्तै पुगिसकेका छन् । तिनको आदर्श, नैतिकता, मूल्य देखाउने दाँत मात्र हो । तिनको लवाइखवाइ, उठबस, घर जग्गाको संकलन, तिनको सम्बन्ध, पार्टीभित्रै र सरकारभित्रै पनि तिनको अचानकको उडान, कसरी उत्थान भयो भनेर हेर्नुभयो भने तिनको रहस्यमयी, तिलस्मी छ। पार्टी र सरकारमा तिनीहरूको भूमिका निरन्तर बढिरहेको छ । तेस्रो थरी छन्— हिजोका आदर्श छँदै छ, मूल्य सम्झेको पनि छ तर अर्काेतिर पार्टीमा बढेका नवधनाढ्यको चकचकी पनि देखिरहेको छ । ती अन्यमनस्क अवस्थामा छन् । ती तेस्रो खाले अन्यमनस्क पंक्ति नवधनाढ्यको पक्षमा लागे भने हामी सकियौँ।
फासिस्टहरू मान्छेलाई मान्छेका रूपमा देख्दैनन्, उनीहरूका लागि हरेक मान्छे कि शत्रु हो कि चाकर हो। साभार नागरिक दैनिक
(२०७५ श्रावण २, बुधबार) ०८:४० मा प्रकाशित